धन राज थापा मगरको पानी पर्यो सिम् सिम् रोचक भिडियो बजारमा
सनाम सुवाल,१९,साउन–धुलिखेल । पछिलो समय निकै नै चर्चित बनेको मोडल धनराज थापा मगरको “पानी पर्यो सिम सिम नयाँम्यूजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । आफ्नो प्रतिभाको कारण सधै चर्चामा रहने गर्छन धनराज । धेरै किसिमको गीतहरुमा म्युजिक अभिनय गर्दै आएको धनराजको पुन नयाँ म्यूजिक भिडियो मार्फत दर्शकको माझ आएका छन् । शिव कुमार बास्कोटा र जुना आले मगरको स्वरमा रहेको उक्त भिडियोलाई कोरियोग्राफ धनराज आफैले गर्नुभएको हो । धनराजको...
राजकुमार राई ,१९,साउन काठमाण्डौं । आर्यन सिग्देल र साम्राज्ञीसाम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसँद्वारा अभिनित “कायरा” फिल्म शुक्रबार रिलिज भएको छ । यो फिल्ममा दुई युगल जोडीबिजको प्रेमकथा देख्न सकिन्छ । यस फिल्मको कथा आर्यन सिग्देल आफैलें लेखेका हुन्। यो फिल्मलाई लक्ष्मण्ण रिजालले निर्देशन गरेका छन् । यसमा निर्देशक रिजालको पनि लगानी रहेको बुझिएको छ । पहिले देखि नै रिजाल र सिग्देल दुबै सँगै फिल्म बनाउने योजनामा थिए, तर भनेजस्तो कथा...
आफ्नो स्थापनाकाल दिवसको मनमोहन कलेजद्वारा रक्तदान कार्यक्रम
कलाखबर संवाददता,१६,श्र्रावण–काठमाण्डौं । मनमोहन मेमोरियल कलेजले बुधबार रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । आफ्नो स्थापनाकाल दिवसको अवसरमा सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा भु.पु विद्यार्थी तथा हाल अध्ययनरत सबै तहका विद्यर्थीहरु समेत सहभागी रहेका थिए । मनमोहन कलेजले आफ्नो स्थापनाकालदेखि आजको मितिसम्म आईपुग्दा सफल्तापूर्वक १९ वर्ष पूरा गरि सकेको छ । सो अवसरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । आफ्नो शैक्षिक पोल्टा भित्र अध्ययनरत विद्यार्थीहरु प्रति यस...
कलाखबर संबाददाता,१३,साउन–काठमाण्डौँ । देश ब्यापी रुपमा गुरु पूजा चलि रहेको अवस्थामा शनिबार मेगा पब्लिक स्कुलमा भने छुट्टै रौनक्ता छाएको थियो । अभिभावक,विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुको बाक्लो उपस्थितिमा भब्य र सभ्य रुपमा गुरु पूजा मनाएका थिए । पहिलो चरणको कार्यक्रममा आसनग्रहण पश्चात प्रध्यानाध्यापक अमृत भण्डारीले पानसमा दीप प्रजवलन गरि राष्ट्रीय गानबाट कार्यक्रममलाई उदघाटन गरेका थिए । उदघाटन पश्चात विद्यर्थीहरुले निकै रोचक नृत्य तथा गीत प्रस्तुत गरेका थिए । विद्यार्थीहरुको बहु प्रतिभाले...
सिरियाको दक्षिणी भागमा आइएस आक्रमण हुदा करिब २ सय ५० जनाको मृत्यु
एजेन्सी– सिरियाको दक्षिणी भागमा इस्लामिक स्टेट्स समूहले आत्मघाती आक्रमण र लगातार गरेको बम तथा गोलाबारीका कारण करिब २५० व्यक्तिको मृत्यु भएको अन्तरास्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएको छ । र आक्रमणमा मारिनेहरुमा आधाभन्दा बढी सर्वसाधारण भएका ‘सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्यूमन राइट्स’का प्रमुख रामी अब्देल रहमानले जानकारी दिए । सरकारको बलियो प्रभाव रहेको सिरियाको दक्षिणी भागमा पर्ने स्वेदामा बुधबार ती आक्रमणहरु भएका थिए । ‘आक्रमणबाट सरकार समर्थक लडाकूहरुको पनि ज्यान गएको र ठूलो...
फेरि त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब ४ किलो सुन बरामद
कलाखबर संवाददाता,९,साउन,–काठमान्डौं । चेक जाँचको क्रममा फेरि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब ४ किलो सुन बरामद गरिएको छ । मंगलबार प्रहरीले ३ किलो अवैध सुन सहित पाँच जना भारतिय नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो। आज बुधबार पनि प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन सहित दुई थाइ नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो। थाई एयरलयान्सको फ्लाइट नम्बर टिजी ३१९ नम्बरको विमानबाट काठमाडौं आएका दुई जना थाइ नागरिकलाई प्रहरीले ३ किलो ६ सय ८० ग्राम...
कलाखबर संवाददाता,६,साउन,–काठमान्डौं । राजधानीको नगार्जुन फेदी तार्केस्वर ८ शान्तिटोलमा रहेको मेगा पब्लिक स्कुल नमुनाको रुपमा स्थापित हुन थालेको छ । आफ्नो स्थापनाकालको छोटो समयमा नै सबै अभिभावक तथा आम बिद्यार्थीको मन जित्न सफल भंएको छ । यो स्कुलले अतिरिक्त क्रियाकलापसँगै प्लेइ गु्रपदेखि पि.एच. डी. सममको गुरु योजना बनाएको प्रिन्सिपल अमृत भण्डारीले बताउनु भयो । विज्ञान विषय लिएर मास्टर डिग्री गरेका भण्डारी केही समय विभिन्न मिडिया क्षेत्रमा समेत आबद्ध...